15 Siyaabood oo Luqadda Ingiriisiga Loogu Barro Ardayda Shiinaha ee Faa'iidada 2022
15 Siyaabood Oo Luqadda Ingiriisiga Loogu Barro Ardayda Shiinaha Si Faa'iido Leh
Waxaad ku bari kartaa Ingiriisiga onlaynka ah ardayda Shiinaha midkood si aad u mashquulsan tahay ama shaqo waqti-buuxa ah oo aad dakhli macquul ah uga hesho shaqada guriga.
Ingiriisku waa luuqad caalami ah, waxaa looga hadlaa ummad kasta oo dhulka joogta, mararka qaarkoodna, waxaa loo adeegsadaa qiimeynta garaadka qofka. Haddii aad leedahay xirfad ama aqoon aad rabto inaad dunida u soo bandhigto oo si degdeg ah laguu aqbalo, adeegsiga luuqadda Ingiriisiga ayaa si dhakhso leh oo caalami ah kuu soo saari doonta. Muhiimadda ku hadlidda luuqadda Ingiriisiga oo si fiican loo qoro si fiican looma adkeyn karo.
Awooddu waxay ku siin kartaa shaqooyin iyo xiriiro caalami ah ama haddii aad rabto inaad wax ku barato dibedda, sidoo kale way kuu imaan doontaa maadaama ay tahay inaad qaadato imtixaanka aqoonta Ingiriisiga haddii aad ka timid waddan aan Ingiriis ahayn. Dadka ka soo jeeda waddamada ku hadla Ingiriisiga ma la kulmaan walaac aad u badan oo qofka aan u dhalan ayaa soo mara marka ay timaaddo caddaynta awooddooda ku hadalka iyo qorista Ingiriisiga.
Si kastaba ha noqotee, kuwa ku hadla Ingiriisiga asal ahaan waxay si dhab ah u adeegsan karaan xirfadahooda dabiiciga ah si ay lacag uga helaan internetka raaxada guryahooda. Tanina waa iyadoo Ingiriisida lagu baro bartayaasha, labadaba dadka waaweyn, iyo carruurta. In kasta oo aysan ahayn kuwa ku hadla Ingiriisiga oo keliya ayaa noqon kara macallimiin Ingiriis ah oo internetka ah laakiin shabakado badan ayaa u baahan inta badan.
Ahaanshaha af -ingiriisiga hooyo ma aha shuruudda kaliya ee ay tahay inaad lahaato si aad Ingiriisiga ugu barato internetka oo aad u kasbato wax badan, waxaa jira shuruudo kale Si degdeg ah hoos ugu fiiri.
1 Shuruudaha lagu Barto Ingiriisiga Ardayda Online -ka ah si Macaash looga helo
2 Shabakadaha Internetka ee Barashada Ingiriisiga Ardayda Shiinaha
2.2 2. EF Ingiriisiga Koowaad
2.4 4. Dhagaha Sixirka
2.8 8. Diyaarso
2.9 9. Sheeko fasal
2.10 10. S-Casharrada
2.12 12. Awoodda Eigo
2.13 13. Lime Ingiriisi
2.15 15. Aniga ayaa Tababare U
3 Siyaabaha Ingiriisiga Loogu Barro Ardayda Shiinaha
Shuruudaha lagu Barto Ingiriisiga Ardayda Online -ka ah si Macaash looga helo
Si Ingiriisida loogu baro internetka, macallimiintu waa inay buuxiyaan shuruudaha soo socda;
Macallimiinta Ingiriisku waa inay lahaadaan shahaado TEFL, CELTA, TESL, ama TESOL.
Noqo qof ku hadla Ingiriis hooyo (ku kala duwan mareegaha) ama ku hadla af Ingiriisiga si fiican
Hayso waayo -aragnimo waxbaris hore (waxay ku kala duwan yihiin bogagga internetka)
Hayso shahaadada bachelor-ka afarta sano ah ee waxbarashada, Ingiriisiga, ama goob kasta (qasab kuma aha websaytyada qaarkood).
Kombiyuutar desktop ama laptop kaas oo la jaan qaada Mac ama Windows OS oo leh kaameerad tayo sare leh
Sameecad madax -weyne leh makarafoon si loo helo isgaarsiin cad.
Xiriir internet oo degdeg ah
Hayso jawi habboon, taas oo ah, meel ku habboon oo aad ku qaban karto fasalladaada oo leh asal nadiif ah oo habboon iyo meel deggan. Iftiimin iyo iftiin ku filan ayaa sidoo kale la tixgeliyaa.
Marka, waxaad aragtaa in ahaanshaha af -ingiriisiga hooyo uusan ahayn shuruud weyn oo ay leeyihiin qaar ka mid ah websaydhadu sidaa darteed waa lahaanshaha waayo -aragnimo hore iyo shahaadada bachelor -ka laakiin websaydhada kuwan oo kale ah aad bay u yar yihiin, xaaladaha badankoodna, wax yar bay bixiyaan.
Shabakadaha barashada Ingiriisiga ee tooska ah waa shay iyo ardayda iyo bartayaasha ka socda dhammaan qaybaha adduunka, oo danaynaya inay horumariyaan luuqadooda Ingiriisiga, ku biiri karaan. Barashada khadka tooska ah hadda waa habka hal -abuurka leh ee wax -barashada, dadku waxay sidan u helayaan dhammaan noocyada shahaadooyinka la aqoonsan yahay mana aha inaad ka tagto maadaama ay jiraan wax badan oo la helo.
Qoraalkan balooga waxaa si gaar ah loogu talagalay macallimiin awood u leh inay Ingiriisiga ku baraan ardayda Shiinaha, ha ahaadaan dad waaweyn ama carruur. Sidoo kale, ardayda Shiineeska ah ee raadinaya siyaabo ay ku hormariyaan awooddooda ku hadalka iyo qorista Ingiriisiga, mareegahaani waa ilo waaweyn waxayna la yimaadaan faa'iidooyin badan.
Arday iyo macallin midna uma baahna inuu ka baxo gurigooda, dhammaan barashada iyo baridda waxaa lagu samayn karaa deegaanno ku habboon oo raaxo u leh barashada iyo baridda. Aaladaha kaqeybgalka ayaa ah aaladaha dhijitaalka ah ee caadiga ah, laptop, kiniin, ama PC oo leh kaamerooyin cad, dhegeysiga shaqeynaya, iyo xiriir internet oo deggan.
Iyada oo loo marayo mareegaha hoos ku taxan, waxaad ku bari kartaa Ingiriisiga khadka tooska ah ardayda Japan oo aad ku kasban kartaa lacag macquul ah adiga oo aan ka bixin mas'uuliyadahaaga jira. Tani waxay ka dhigan tahay inaad iskugu dari karto shaqada barashada onlaynka iyo tan aad hadda samaynayso ama aad u qaadan karto barashada onlaynka sidii shaqo waqti-buuxa ah, doorbidkaaga.
Shabakadaha Internetka ee Barashada Ingiriisiga Ardayda Shiinaha
EF Ingiriisiga Koowaad
Aniga Tababaraha U
VIPKID waxaa adeegsada kumanaan arday oo ka kala yimid adduunka oo dhan si ay ugu bartaan Ingiriisiga khadka tooska ah websaydhkuna waa mid ka mid ah hababka lagu baro Ingiriisiga ardayda Shiinaha. Websaydhku wuxuu u dabacsan yahay macallimiinta wuxuuna leeyahay mushahar sare oo ah $ 14 illaa $ 22 saacaddii iyo macallin ahaan, waxaad jadwalkaaga u dejin kartaa oo aad ula qaban kartaa fasal hal-hal arday ah.
Intaa waxaa dheer, mareegtu waxay kaa caawineysaa inaad qorsheysid manhajyada casharrada si aadan waqtiga kaaga lumin qorsheynta intaas oo dhan oo aad beddelkeeda xoogga saarto waxbaridda. Macallimiintu waa inay haystaan ​​shahaado TEFL oo leh shahaadada koowaad ee maaddo kasta oo ay ka go'an tahay heshiiska lixda bilood ee madal.
2. EF Ingiriisiga Koowaad
Ingiriisiga Koowaad waa mid ka mid ah shirkadaha ugu qadiimsan wax-barashada onlaynka ah oo marka aad iska diiwaangeliso macallin ahaan mareegaha waxaad ku bari kartaa Ingiriis khadka tooska ah ardayda Shiinaha oo aad kasban kartaa $ 10- $ 17 saacaddii. Waxaad wax u bari kartaa dadka waaweyn ama ardayda da 'yar ahaan koox ahaan ama ikhtiyaar qof-qof ah waxaadna la shaqayn kartaa jadwal ku habboon hab-nololeedkaaga.
Manhajka waxbaridda ayaa sidoo kale horay loo qorsheeyay si aad xoogga u saarto waxbaridda. Waa inaad haysataa shahaadada waxbaridda iyo shahaadada bachelorka goob kasta si aad ugu shaqeyso Ingiriisiga Koowaad.
iTutorGroup waa shirkad waxbarasho oo toos ah oo xarunteedu tahay Shanghai, Shiinaha, waxaana sidoo kale laga yaabaa in loo yaqaan Tutor ABC. Si aad ugu barato Ingiriisiga khadka tooska ah ardayda Shiinaha ee degelkan, waa inaad noqotaa TEFL oo haysta shahaadada koowaad ee jaamacadda. Waxaad samayn kartaa fasallo hal-hal ah ama fasal kooxeed oo aan ka badnayn lix arday.
Halkan, agabyo ayaa sidoo kale laguu siiyay waxaana laga yaabaa inaad wax barato ardayda Shiinaha ama dadka waaweyn. Mushaharka saacaddiiba wuxuu ka socdaa 5 - 22 doollar waxaadna heli kartaa gunno taas oo sii fiicnaanaysa inta aad sii waddo la shaqaynta shirkadda.
4. Dhegaha Sixirka
Haddii aad ka timid mid ka mid ah waddammada ku hadla Ingiriisiga oo aad u baahan tahay buuq dhinaca aan dhib lahayn si aad lacag uga hesho, waxaad tixgelin kartaa inaad iska qorto Magic Ears oo aad Ingiriisiga ku barato ardayda Shiinaha. Fasallada waxaa loo qabtaa hal-qof oo bixinaya illaa $ 26 saacaddii. Waxaad wax bari doontaa oo keliya barteyaasha yaryar ee Shiinaha ee jira 4-12 sano.
Runtii waa shirkad fadhigeedu yahay Shiinaha oo xitaa uma baahnid shahaadada koowaad ee jaamacadda si aad u noqoto macallin laakiin waa inaad haysataa shahaadada waxbaridda sida TEFL ama TESOL.
Gogokid had iyo jeer wuxuu raadiyaa inuu shaqaaleysiiyo dadka Ingiriisiga wax ku bari kara ardayda Shiinaha. Casharrada halkan ku yaal waa fadhiyo hal-hal ah waxaadna bari doontaa carruurta da'doodu u dhaxayso 4 ilaa 12 sano jir. Waa xulasho wanaagsan oo ka dhexaysa waalidiinta raba inay carruurtu bartaan Ingiriisiga iyagoo da 'yar. Si aad shaqadan u qabato, waxaad u baahan tahay inaad haysato shahaadada bachelor -ka, inaad noqoto af -ingiriisiga hooyo, aad hesho shahaadada wax -barashada, oo aad haysato 2 sano oo waayo -aragnimo barisnimo ah.
Shuruudaha wax lagu baro Gogokids waa kuwa ugu adag laakiin mushaharku waa macquul $ 14 illaa $ 25 saacaddii oo ay weheliso gunnooyinka aad kasban karto iyada oo ku xidhan qiimeynta waxqabadkaaga, khibradaada, iyo dhowr saacadood oo khadka tooska ah ah.
Italki waa mid ka mid ah meheradaha laga yaabo inaad kasbato nolol wanaagsan markaad Ingiriisiga ku barato ardayda Shiinaha. Boggan wuxuu kuu oggolaanayaa inaad doorato saacadahaaga qiimeynta iyo waxbaridda, si kastaba ha ahaatee, way adag tahay inaad macallin ka noqoto madalkan. Habka codsigu waa sahlan yahay, laakiin waa inaad diyaarisaa aqoonsiyadaada taageeraya, sida shahaadada waxbaridda oo leh shahaado.
iTalki dhab ahaantii waa degel aad ku baran karto luqado kala duwan oo aan ahayn Ingiriis oo kali ah. Fasallada waxaa loo qabtaa hal-qof iyada oo loo marayo wada sheekaysiga fiidiyaha.
Haddii aadan ahayn af -ingiriisi hooyo, aadan lahayn khibrad wax -baris, ma lihid shahaadada wax -barashada, oo aadan haysan shahaadada bachelor -ka laakiin aad weli rabto inaad Ingiriisiga ku barato ardayda Shiinaha, markaa Cambly ayaa kuu ah meesha. Websaydhku ma laha shuruudo uu ku aqbalo macallimiinta degelkooda, laakiin waxaa jira habab adag oo adag oo aad u baahan tahay inaad soo marto kahor intaan lagu aqbalin.
Baridda waxaa lagu sameeyaa wada sheekaysiga fiidiyaha ama qoraalka waxaadna kasban kartaa ilaa $ 10.20 saacaddii. Websaydhku wuxuu u shaqeeyaa si ka duwan kuwa kale ee halkan jooga, ma jiro manhaj go'an, waxaad si fudud u geli kartaa internetka, waxaad la kulmi kartaa arday oo waxaad ku bari kartaa Ingiriisiga qoraal ahaan ama sheekaysiga fiidiyaha iyo hagaajinta khaladaadkooda naxwe ahaaneed si ay uga caawiso inay horumariyaan.
Preply waa barxad onlayn ah oo kuu oggolaanaysa inaad ku barato Ingiriisiga ardayda Shiinaha. Waa shirkad waxbarid oo gaar loo leeyahay oo leh kumanaan arday firfircoon sanad walba. In kasta oo Ingiriisigu uusan ahayn luqadda ama mowduuca keliya ee halkan lagu baray, haddana waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan, gaar ahaan kuwa Aasiya.
Waxaad ku kasban kartaa ilaa $ 60 saacaddii macallin ahaan madalkan, laakiin waa inaad noqotaa macallin shahaado u leh codsigaaga si loo aqbalo.
Classtalk, waxaad ku bari kartaa Ingiriisiga khadka tooska ah ardayda Shiinaha ee u dhexeeya 6 iyo 10 sano jir. Macallin cusub ahaan, celceliska mushaharku waa qiyaastii $ 20 saacaddii oo wuu ka sii sarreeyaa haddii aad fasallo badan bil walba barato. Madalku wuxuu kaloo u diyaariyaa agabyada macallimiinta, markaa ha ka welwelin abuurista mid.
Shuruudaha waxaa ka mid ah lahaanshaha hal sano oo waayo -aragnimo wax -baris ah, shahaadada waxbaridda, iyo shahaadada koowaad ee waxbarashada ama goob kasta.
Miyaad raadineysaa hab aad lacag uga hesho raaxada gurigaaga? Casharrada S-Casharku waxay kuu oggolaanayaan inaad dadka waaweyn iyo carruurta Jabaan ku barato Ingiriisiga oo aad kasbato $ 10 illaa $ 15 saacaddii. Ma jiro wax walwal ah, ma jiro safar; waxa kaliya ee aad u baahan tahay waa kombiyuutar, sameecadaha dhegaha, iyo isku xirnaan internet oo lagu kalsoonaan karo si aad u bilowdo.
Si aad ugu shaqayso baraha Ingiriisiga ee madasha, waa inaad haysataa shahaadada koowaad ee jaamacadda, ugu yaraan hal sano oo waayo -aragnimo wax -baris ah, iyo rabitaanka inaad shaqayso ugu yaraan 10 saacadood toddobaadkii. Jadwalku waa mid la beddeli karo, koorso kastana waxay qaadataa qiyaastii 22 daqiiqo.
Markaad joogto Palfish waxaad u baahan tahay inaad ku haysato shahaadada koowaad ee jaamacad kasta oo weyn ama goob kasta, aad haysato shahaado TEFL, oo ​​aad noqoto af -Ingiriisi hooyo ka hor intaadan awoodin inaad Ingiriisiga ku barato ardayda Shiinaha. Waxaad la shaqayn doontaa ardayda da'doodu tahay saddex jir, sidaas darteed, waxaad u baahan tahay inaad yeelato waayo -aragnimo baris si aad si fiican ula shaqayso carruurtan.
Waxay leedahay codsi ku habboon Android iyo macruufka. Waxaad dejin kartaa qiimayaasha saacadahaaga inta u dhexeysa $ 10 illaa $ 30 saacaddii.
12. Awoodda Eigo
Waxaad ku bari kartaa Ingiriisiga khadka tooska ah ardayda Shiinaha ee da 'kasta leh Awoodda Eigo. Waa mid ka mid ah bogagga ka caawiya carruurta inay internetka ku bartaan Ingiriisiga. Si aad halkaan ugu noqoto macallin online ah, waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso waa inaad muujiso inaad leedahay xirfado ku hadlidda Ingiriisiga oo weyn, waxayna u oggolaadaan macallimiinta aan u dhalan. Shahaadooyinka waxbaridda iyo shahaadooyinka bachelor -ka looma baahna, waxay aad ugu egtahay Cambly.
Dakhliga celceliska warshadaha ayaa aad u yar, oo u dhexeeya $ 5 ilaa $ 12 kaliya, marka loo eego celceliska warshadaha.
13. Lime Ingiriisi
Lime English waa shirkad hadafkeedu yahay isku xirka ardayda Shiinaha iyo macalimiinta Ingiriiska. Waxay raadinayaan macallimiin ardayda ka caawin kara qorista iyo akhriska halkii ay xoogga saari lahaayeen hadalka. Kani waa ikhtiyaar ikhtiyaari ah haddii aad ku qanacsan tahay baridda iyo tafatirka qalabka Ingiriisiga ee qoran.
Badi ardayda waa carruur da'doodu u dhaxayso 5 ilaa 12. Waxaad jadwalkaaga u habayn kartaa si aad u daboosho baahiyahaaga gaarka ah. Gunnooyin ayaa la siiyaa macallimiinta shaqeeya saacado dheeraad ah ama leh qiimeyn aad u fiican. Shahaadada barashada iyo shahaadada bachelorka ayaa looga baahan yahay inay halkan ka shaqeeyaan. Heerka mushaharku wuxuu u dhexeeyaa $ 16 illaa $ 25 saacaddii.
VIPX waa qayb ka mid ah TAL, oo ​​ah mid ka mid ah keydadka waxbarashada dadweynaha ee ugu weyn Shiinaha iyo mid ka mid ah mareegaha lagu baro Ingiriisiga ardayda Shiinaha. Shirkaddu waxay shaqaalaysiisaa macallimiin Ingiriis ah oo siin kara umeerin hal-hal ah carruurta Shiinaha ee da'doodu u dhaxayso 4 ilaa 15. Iyada oo ku dhawaad ​​90% macallimiinta loo qorsheeyay fadhiyo, madalkani wuxuu leeyahay mid ka mid ah qiimayaasha ugu ballaadhan ee suuqa.
Cambridge iyo National Geographic waxay ku siin doonaan agab waxbarasho si aad u isticmaasho. Future Cloud, oo ah madal is -dhexgal ah oo u oggolaanaysa ardayda inay si toos ah ula xiriiraan macallimiinta, waxaa adeegsada shirkadda. Waxaad heli doontaa 24 saacadood cashar kasta ka dib si aad jawaab uga siiso waxqabadka ardayga. Shahaadada bachelorka iyo shahaadada waxbaridda ayaa loo baahan yahay. Heerka mushaharku waa $ 20 ilaa $ 22 saacaddii.
15. Aniga ayaa Tababare U
Liiskayada ugu dambeeya ee shabakadaha si loogu baro Ingiriisida ardayda Shiinaha Shiine I I Coach U. waa shirkad u dhiganta ardayda Shiinaha oo si fiican ugu hadla Ingiriisiga. Shirkadda fadhigeedu yahay Wuhan waxay abuurtaa fasallo onlayn ah iyo fadhiyo umeerin iyadoo la adeegsanayo madal waxbarasho oo onlayn ah. Waxaad wax u dhigi kartaa koox arday ah isku mar ama hal mar kaliya. Waxaa laga yaabaa inaad ka shaqayn karto fasallada goobta haddii aad tahay macallin Ingiriis ah oo ku nool Shiinaha.
Uma baahnid inaad qorsheysato casharradaada maxaa yeelay koorsooyinka waa la diyaariyey. Intaa waxaa dheer, ururku wuxuu leeyahay koox taageero farsamo oo la heli karo 24 saacadood maalintii, toddoba maalmood toddobaadkii si ay kaaga caawiyaan wixii arrimaha socodka ah ee laga yaabo inaad la kulanto koorsooyinkaaga oo dhan. Waa inaad haysataa khibrad baris oo hore, shahaadada bachelorka, iyo shahaadada waxbaridda si aad uga shaqeyso mareegaha.
Kuwani waa websaydhada si loogu baro Ingiriisiga ardayda onlaynka ah, buuxiyo shuruudaha kahor intaadan codsan macallin ahaan.
Siyaabaha Ingiriisiga Loogu Barro Ardayda Shiinaha
Waa tan sida aad Ingiriisiga ugu bari karto ardayda Shiinaha;
Noqo shahaadada TEFL ama hel shahaado waxbarid oo la aqoonsan yahay oo la aqoonsan yahay
Ka codso shirkadaha internetka ama shabakadaha aad ku baran karto Ingiriisiga khadka tooska ah ardayda Shiinaha sida kuwa kor ku xusan.
Wakhtiga farqiga u dhexeeya, iyada oo ku xidhan meesha aad ku nooshahay adduunka ayaa laga yaabaa in lagaa filayo inaad shaqayso subaxdii, fiidkii, ama dhammaadka toddobaadka.
U beddel meel bannaan oo gurigaaga ah fasal dalwaddii ah
Qorshee casharradaada, intabadan mareegahaani waxay kuu qorsheeyaan casharro jidka
Wax ka ogow xiisaha ardaydaada
Ku dhiiri geli ardaydaada.
Ma ku bari karaa Ingiriis khadka tooska ah ardayda Shiinaha shahaado la'aan?
Haa, waxaad ku bari kartaa Ingiriisiga khadka tooska ah ardayda Shiinaha oo aan shahaado haysan, qaar ka mid ah websaydhada halkan kama dhigayaan inay haystaan ​​shahaado khasab ah inay wax ku bartaan.
Intee in le'eg ayaan ka dhigi karaa barashada Ingiriisiga ardayda onlaynka ah?
Xaddiga lacagta aad ku dhigto barashada Ingiriisiga ee internetka ardayda Shiinaha ayaa ku xiran websaydhka iyo xaddiga shaqada aad gelisay laakiin heerka caadiga ah waa $ 20 saacaddii.
Sideen ugu baran karaa Ingiriisiga khadka tooska ah ee Shiinaha?
Raadi shabakado kuu oggolaanaya inaad Ingiriisiga ku barato ardayda Shiinaha, 15 ka mid ah ayaa lagu sharraxay lagana dooday qoraalkan baloogga, buuxi shuruudaha lagama maarmaanka ah, ka dibna is qor oo bilaw baridda.
13ka Shabakadood ee Waxbarista Ingiriisiga ee Onlineka ah
15 Koorsooyinka Tababarka Dayactirka Taleefanka Gacanta ee Bilaashka ah
Previous Post:13ka Shabakadood ee Waxbarista Ingiriisiga ee Onlineka ah
Post Next:15 Kulliyadaha yaryar ee ugu Fiican Dhexe Dhexe